बालेनले किन गरे अहिले विजयी जुलुस ननिकाल्ने घोषणा ? - Dhangadhi Khabar
बिहिबार १६, असार २०७९ १३:२७
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन साह)को जित सुनिश्चित भएको छ । जित सुनिश्चित भएसँगै उनले घोषणापत्रमा भएका कुराहरु लागु गर्न सकेका दिन सबै मिलेर विजय उत्सव मनाउने बताएका छन् ।
काठमाडौंको मेयरमा बालेनको जित पक्का , सिर्जना कति मतान्तरले पछाडि ?
काठमाडौं बालेनकाे जित सुनिश्चित, २२ हजार मत गन्न बाँकी २० हजारकाे अग्रता
बुधबार ११, जेठ २०७९ ०३:४६ मा प्रकाशित